Kugadzirwa kwemukati mezvidzidzo uchishandisa mawebhu webhu uye zvirongwa | Linux Vakapindwa muropa
Mharidzo dzekuratidzira chimwe chezvishandiso zviri nyore kugadzira zvemukati zvedzidzo
Kuvharirwa kwakaiswa munyika dzinoverengeka dzepasi nekuda kwedenda razvino, kwakamanikidza nyanzvi zhinji kuti dzishandure nzira yavo yekushanda. Icho chiitiko chevadzidzisi kuti kubva rimwe zuva kusvika pane rinotevera, ivo vaifanirwa kuchinjisa zvemukati zvakagadzirirwa kuendesa vakatarisana-kumeso kune fomu yedhijitari.
Ya takaongorora muLinux Inopindwa muropa nedzimwe sarudzo dzakavhurika dzekugovana izvo zvirimo. Mune ino nhevedzano yepositi tichaona dzimwe nzira dzekugadzira uchishandisa Linux inoenderana zvirongwa uye webhu masevhisi.
1 Kugadzirwa kwemukati wedzidzo. Zvemukati mhando
1.1 Nguva yekushandisa yega yega mhando yezvinyorwa
2 Kupatsanura kwemidziyo yekugadzira yezvinyorwa zvedzidzo
2.1 Kupatsanura zvinoenderana nenzira yekumisikidza
2.2 Kupatsanura maererano nekushandisa
Kugadzirwa kwemukati wedzidzo. Zvemukati mhando
Izvo zvakasiyana zvemukati zvinogona kugadzirwa zvinoenderana zvakanyanya nekufungidzira. Ndinoziva mumwe munhu anobata nepepa risina chinhu, chinyoreso, uye kamera mbozhanhare. Bhodhi uye vhidhiyo kamera inogona zvakare kushandiswa. Asi kazhinji pTinogona kuvakamura kuita maviri:
Static zvemukati: Kuitsanangura nenzira yakapusa, ndiyo mhando yezvinyorwa zvataizofunga zvemafomati epepa. Zvinyorwa zvinyorwa, infographics, nezvimwe.
Zvemukati zvine simba. Pano tinoreva zvemultimedia zvemukati; mharidzo, zvinyorwa zvakaverengwa, mavhidhiyo, nezvimwe.
Nguva yekushandisa yega yega mhando yezvinyorwa
Multimedia zvemukati zvinoda kumwe kugadzirwa, saka kushandiswa kwayo inofanirwa kuve yakatemerwa kune izvo zviitiko apo fomati inopa chimwe chinhu. Somuenzaniso:
Kana iwe uri chemistry mudzidzisi, kuita kuti vadzidzi vako vapupure kuti mamwe makomputa anoita sei kana asanganiswa, zvinopa zvakawanda. Zvakare, kana iwo makomponi akaputika uye iwe uri kutepfenyura zviripo, uchaenda kuhutachiona. Muchiitiko chekuti iwe uri mudzidzisi wemasvomhu, kuzvipfura iwe uchiratidza iro Pythagorean theorem pabhodhi zvimwe haawedzere kumusoro kune zvakawanda.
Nenzira imwecheteyo, mudzidzisi wemutauro anofanirwa kusanganisira mafaera ekuteerera pamwe nekududzwa kwemazwi. Asi kune mudzidzisi wenhoroondo zvinogona kuve nyore kugadzira girafu ine nguva yenguva.
Imwe nyaya mune zvemultimedia zvemukati zvisina kururamiswa ndipo patinoshanda pamwe nedzidziso yekuvandudza uye nzira dzekuongorora.
Dzidziso uye ongororo
Kana tikataura nezve fundo yechikoro, zvingangoita kuti vadzidzi vatove nemabhuku avo ekuverenga. Uye zvakare, nekukurumidza kana bhuku rapedza kunyora, kusungwa kunosungirwa kwatopera. Asi, pane magwaro mapfupi pane anogona kunyorwa; mibvunzo, magwaro ekudzidza, tsananguro dzakatsanangurwa, nezvimwe.
Tinofanira kuziva kuti denda harimise mitemo yekopiraiti. Hapana nzira yaunogovana nayo zvinhu zvekudzidzisa zvisiri zvako. Neimwe chikonzero, iro basa rekumhan'arira vamwe vagari kuzviremera zvinoita kunge rakawedzera mune vamwe vanhu. Chinhu chakanakisa ndechekuti kana iwe uchifanirwa kugovana chinyorwa, chiitarise, ita Optical character kuzivikanwa uye kuigadzirisa. Gare gare tichaona izvo zvishandiso zvinogona kushandiswa.
Kupatsanura kwemidziyo yekugadzira yezvinyorwa zvedzidzo
Tinogona kupatsanura maturusi ekugadzira zvemukati zvedzidzo zvinoenderana ne:
Iyo yekuisa nzira:
Kupatsanura zvinoenderana nenzira yekumisikidza
Mune ino kesi tinogona kusiyanisa maviri makirasi ezvirongwa
Izvo izvo hazvidi kuisirwa: Iwo masevhisi ayo anoshandiswa kubva kubhurawuza pasina chero mhando yekuisa: Iyi ndiyo kesi yemahofisi masutu akadai seGoogle Docs kana Hofisi 365, mabasa ekugadzira mharidzo senge Prezi kana zvemukati zvemasocial network senge Adobe Spark.
Izvo zvakaiswa: Zvirongwa senge izvo zvinowanzoiswa uye zvinogona kushandiswa kugadzira zvemukati zvemfundo. Mimwe mienzaniso inogona kunge iri LibreOffice hofisi suite, iyo Kdenlive vhidhiyo mupepeti kana iyo Gimp mufananidzo mupepeti.
Kupatsanura maererano nekushandisa
Mune ino kesi isu tinokamura mapurogiramu uye webhu masevhisi zvinoenderana nekubatsira kwavo.
Masisitimu anoshanda: Iwo akaiswa pane rakaomarara dhiraivha kana anoshandiswa kubva inobvisika yekuchengetedza midhiya. Iwo akagadzirirwa yako chinangwa uye anosanganisira ese anodikanwa mapurogiramu akafanogadzwa-akaiswa.
Hofisi suites: Ivo anoshandiswa kugadzira zvinyorwa zvemavara, midhiya mharidzo uye mune dzimwe nguva mifananidzo.
Vateereri vemavhidhiyo nevhidhiyo: Ini ndinofungidzira kuti iyi poindi haidi kujekeswa. Asi, kutevedzera, ngatiti ivo vanoshanda kugadzirisa odhiyo uye vhidhiyo.
Mufananidzo wekutora uye wekuziva hunhu kuziva: Pamwe uchishandisa scanner kana nhare mbozha, rudzi urwu rwekushandisa rwuchatipa kugona kushandura magwaro eanalogog kuita fomati yedhijitari uye kuagadzirisa.
Muchinyorwa chinotevera tichaongorora dzimwe nzira dzakasiyana uye nekurudzira maturusi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kugadzirwa kwemukati mezvidzidzo uchishandisa webhu masevhisi uye zvirongwa
Matias Bordon akadaro
Vakuru vanhu! Ndatenda! Iwe unoda here ruoko nechimwe chinhu? Iwe une rondedzero yesarudzo dzauri kuenda kuongorora?
Pindura Matias Bordone
Chokwadi ndechekuti ndiri kuona pane kubhururuka izvo zvinouya uye zvinosara kune imwe chinyorwa.
Chero zvataurwa zvichagamuchirwa.
Kana iwe uchifarira kubatana neLinux Vakapindwa muropa, izvi zvinogona kukufadza.
Collabora vagadziri vakaunza nyowani Gallium controller yeMesa